ဘောလုံးသမား Part II | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဘောလုံးသမား Part II
ဘောလုံးသမား Part II
Posted by မောင် ပေ on Aug 9, 2011 in Creative Writing, Think Different |9comments
ကိုယ်ကိုတိုင် ရေးသော အမှာစာ ။ ။ 8.8.2011 က ` ဘောလုံးသမား များ ဒီကိုလာ ´ ဆိုတဲ့ ပို့ စ် ကို တင်ခဲ့ပါတယ် ။ ကျွန်တော် သိထားတာ ကတော့ ဂေဇက် အဖွဲ့ ဝင်တော်တော်များများ ဟာ အသက် ၅၀ ပတ်ချာလယ် တွေ လို့ ပါ ။ သို့ ပေသည့် ၊ ဒီဘောလုံးပွဲ လောင်းတာ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရေးထားတာကို မမြင်မိလို့ ရေးလိုက်တာပါ ။ အသက် ၅၀ အရွယ်တွေ အတွက် ကတော့ ကျွန်တော် ရေးတင်တဲ့ ပို့ စ်လေးဟာ သိပြီးသား ဖြစ်နေမှာပါ ။ ပျင်းစရာ ဖြစ်မှာပါ ။ ထို့ အတွက် အထူး သည်းခံ ခွင့်လွတ်ပေးကြဖို့ လည်း တောင်းဆိုချင်ပါတယ် ။ ရေးပြီ ဆိုမှတော့ သိထားသလောက် လေးတွေ ကို အကုန်အစင် ပြန်လည် ဝေမျှ ပေးချင်တဲ့ အတွက် အခု ဆက်ပြီးရေးတင်လိုက်ပါပြီ ။ ဖတ်ပြီးလို့ မှားနေတာ တွေ့ ခဲ့ရင်လည်းကွန်မင့်အနေနဲ့ ဝေဖန်ပြောပေးကြပါဦးလို့ တောင်းဆိုပါရစေ နော် ။ပထမ ပို့ စ် မှာ ကိုဘီလူး ၀င်မန်းသွားသလို ဘောလုံးပွဲ ဒိုင် မဟုတ်ဘူး ဆိုတာလည်း အသိပေးအပ်ပါတယ် ။ ထိုးသား တစ်ယောက် ပါ ။ ဘောလုံးပွဲ လောင်းတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး၊ သိထားတာလေး တွေ ကို ရေးလိုက်ပါပြီ ။
ဘောလုံးပွဲ ဆိုတာ လောင်းလို့ ရပါလား ဆိုတာ ကို ၂၀၀၀ ခုနှစ် မှာ စသိခဲ့ပါတယ် ။ အဲဒီတုန်း က ရန်ကုန် ၊ မန်းတလေး မြို့ တွေ မှာ အခကြေးငွေ ယူပြီး ဘောလုံးပွဲ ပြသတဲ့ ရုံတွေ ရှိပါတယ် ။ အဲဒီ ရုံတွေ ထဲ မှာ တင် လောင်းလို့ ရပါတယ် ။ အဲဒီ ရုံတွေ က ဘောလုံးပွဲ ရှိတဲ့ နေတိုင်း ဘောလုံးပွဲ တွေ ပြလေ့ရှိပါတယ် ။ ဘောလုံးပွဲ မရှိတဲ့ အချိန်မျိုးဆို ဗီဒီယို ရုံ ပါ ။ ဘောလုံး ပွဲ ရှိတဲ့ နေ့ မျိုးတွေ မှာဆိုရင် ၊ ဘောလုံးပွဲ မစခင် ၅ မိနစ်လောက် အချိန်အထိ ၊ ရုံထဲ မှာ စားပွဲခုံ တစ်ခုံ နဲ့ ထိုးကြေး လက်ခံပါတယ် ။ နံရံ မှာ ဘလက်ဘုတ် ( သို့ ) ၀ှိုက်ဘုတ် တစ်ခု ကပ်ထားပြီး ၊ ဘောလုံးပွဲစဉ် များ နဲ့ပွဲစဉ်တစ်ခု စီဘေးမှာ ပေါက်ဈေး ( လောင်းကစားခြင်းအတွက် ) ကို ရေးထားပါတယ် ။ လောင်းချင်တဲ့ သူ က အဲဒီ ဘလက်ဘုတ် မှာ ကိုယ်လောင်းချင်တဲ့ ပွဲ ရဲ့ ပေါက်ဈေးကို ကြည့် ။ ပြီးရင် လောင်းမယ် ဆိုရင် ၊ စားပွဲခုံ မှာ ဒိုင် ကိုယ်တိုင် သော်လည်းကောင်း ၊ စာရေး များသော လည်းကောင်း ထိုင်ပြီး လက်ခံ နေပါတယ် ။ သူတို့ ဆီ မှာ ကိုယ်လောင်းချင် တဲ့ အသင်း နဲ့ ကိုယ်လောင်းမယ့် ငွေပမာဏ ကို ပြောလိုက်ရပါတယ် ။ သူတို့ က စာရင်းသွင်းပြီး ဘောင်ချာအသေးလေး ( ရွက်စုတ် ) တစ်စောင်မှာ ၊ ကိုယ်လောင်းတဲ့ အသင်းနဲ့ လောင်းတဲ့ ငွေပမာဏ ကို ရေးပြီး ပြန်ပေးပါတယ် ။ ကိုယ်လောင်းလိုက်တဲ့ ဘောလုံးပွဲ ပြီး ပြီ ဆိုမှ ၊ ကိုယ် က နိုင်တယ် ဆိုရင် ၊ အဲဒီ ဘောင်ချာ နဲ့အနိုင်ရငွေ ကို သွားထုတ်ရပါတယ် ။ ဒိုင်တစ်ချို့ က ဘောင်ချာ ပျောက်ရင် အလျော်အစား မလုပ်ပါဘူး ။ တစ်ချို့ ဒိုင်တွေ က တော့ ကိုယ့်ရဲ့ နာမည် ( မာကာ လို့ လဲ ခေါ်ပါတယ် ) ကို မှတ်ယူထားပါတယ် ။ အဲဒီ မာကာ နဲ့ ပြန်လျော်ပေးပါတယ် ။ တစ်ချို့ ဒိုင်တွေ ကြတော့ ဘောင်ချာ နံပါတ် နဲ့ ပြန်တိုက်ပြီး အလျော်ပေးပါတယ် ။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်ပတ်ချာလည် တုန်းက ဆိုရင် အခုရေးပြထားတဲ့ ဘောလုံးပွဲပြသပြီး လောင်းကြေး လက်ခံ တဲ့ ဒိုင်တွေ အများကြီး ရှိခဲ့ပါတယ် ။ အနည်းဆုံး ရပ်ကွက် တစ်ခု မှာ တစ်ရုံတော့ အနည်းဆုံး တွေ့ ခဲ့ဖူးပါတယ် ။ အဲဒီတုန်း က ဆိုရင် ရဲတွေ လည်း ၀င်ငွေ တော်တော် ဖြောင့်ခဲ့ကြပါတယ် ။ ဘောလုံးပွဲ ရုံ တစ်ရုံ အနေ နဲ့ တစ်လ ပေးရတဲ့ ရဲကြေး က လည်း မနည်းပါဘူး ။ ဒါ့အပြင် ပွဲရှိတဲ့ နေ့ တွေ မှာ ပတ်တရောင် လှည့်တဲ့ ရဲတွေ ကို ပါ နေ့ စဉ် ကြေး သီးသန့်ပေးရပါသေးတယ် ။
အဲဒီ ရုံတွေ မှာ (focus) ဖိုးကပ်စ် လို့ ခေါ်တဲ့ ပွဲအပြီး ထွက်မယ့် ရလဒ် ၊ ဥပမာ ( ၁-၁ ) ၊ (၀-၀) အစရှိသဖြင့် ၊ ခန့် မှန်းလောင်းတဲ့ လောင်းခြင်း ကို လည်း လောင်းလို့ ရနိုင်ပါတယ် ။ ဖိုးကပ်စ် ကတော့ အဆ တွေ နဲ့ လျော်ပါတယ် ။ အနည်းဆုံး ၇ ဆ မှ သည် ၃၆ ဆ လောက်အထိ လျော်ပါတယ် ။ ဥပမာ ပွဲတော်တော် များများ မှာ အဖြစ်များတဲ့ (၀-၀) လို ရလဒ်မျိုး ကို လောင်းမယ် ဆိုရင် ၇ ဆ ပါပဲ ။ ဖြစ်နိုင်ချေ နည်းတဲ့ ရလဒ် မျိုးကို လောင်းမယ် ဆိုရင်တော့ အဆ များပါတယ် ။ ဥပမာ ( ၅-၁) လို ရလဒ် မျိုး ဆိုရင် အဆပေါင်း ၃၀ကျော် လျော်ပါတယ် ။ ဒီဖိုးကပ်စ် မျိုးကိုတော့ လောင်းတာ နည်းပါတယ် ။ ဘော်ဒီ လောက် သိပ်မလောင်းကြပါဘူး ။ သူ က တော်တော်ကြီး ခန့် မှန်းရတာမို့ ပါ ။ ဖြစ်နိုင်ချေ နည်းလို့ လဲ ဒိုင်များက ဆ တွေ နဲ့ လျော်တာပါ ။အကောက် က တော့ ၁၀ % မှ သည် ၁၅ % အထိ ကောက်ကြပါတယ် ။ယနေ့ ခေတ် မှာတော့ ဒီဖိုးကပ်စ် ကို ဒိုင်တွေ မဖွင့်ကြတော့ပါဘူး ။ လောင်းလို့ မရနိုင်တော့ပါဘူး ။ ရှားရှားပါးပါး တစ်ချို့ သော ဒိုင်ကြီး အနည်းငယ်သာ ဖွင့်တတ်ပါတယ် ။ နည်းပါတယ် ။
ဂိုးပေါင်း လောင်းတာကိုလည်း ပြောပြချင်ပါတယ် ။ ဂိုးပေါင်း ဆိုတာ က ၊ ဘောလုံးပွဲ တစ်ပွဲ မှာ ဂိုးသွင်းကြတဲ့ ဂိုးအရေအတွက် ကို ခန့် မှန်းလောင်းတာပါ ၊ ဂိုးပေါင်း အပေါ် နဲ့ဂိုးပေါင်း အောက် ဆိုပြီး ၂ မျိုး ရှိပါတယ် ။ ဥပမာ အခု ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေ နေ့ ည က ကန်ခဲ့တဲ့ မန်ယူ နဲ့ မန်စီးတီး တို့ ပွဲ ဟာ ၃ ဂိုး ၂ ဂိုး နဲ့ ပြီးခဲ့ပါတယ် ။ အဲဒီပွဲ ဆိုရင် ဂိုးပေါင်း အပေါ်စားတယ် လို့ ခေါ်ပါတယ် ။ ကိုယ်က အဲဒီပွဲ မှာ ၊ ကန်ကြတဲ့ အသင်းများ အနေနဲ့ ဂိုးသွင်းများကြမယ် လို့ ယူဆ ပြီး ဂိုးပေါင်းအပေါ် ၁၀၀ ကျပ် လောင်းခဲ့မယ် ဆိုရင် ၉၅ ကျပ် အလျော် ရမှာပါ ။ ဂိုးပေါင်းမှာ အကောက် က ဘော်ဒီနဲ့ အတူတူပါပဲ ။ ၅% ကောက်ပါတယ် ။ တစ်ကယ်လို့ မန်ယူ နဲ့ မန်စီးတီး ကန်ခဲ့တဲ့ ပွဲဟာ ဂိုးမရှိ သရေ နဲ့ ပြီးခဲ့မယ် ဆိုရင် တော့ ဂိုးပေါင်း အောက် စားတာဖြစ်ပြီး ဂိုးပေါင်းအောက် လောင်းထားတဲ့ သူတွေ အလျော်ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဂိုးပေါင်း ဈေး ကိုတော့ ၂ ဂိုး ၅၀ ရှုံး ၊ ၂ ဂိုး ၅၀ စား ၊ ၃ လုံး ၅၀ ရှုံး ၊ ၃ လုံး ၅၀ စား ၊ ၂လုံးသရေ ၊ ၃ လုံးသရေ အစရှိသဖြင့် ဖွင့်ကြပါတယ် ။ ၂ သရေ ဆိုတာ က (၁-၀) ၊ (၀-၁) ၊ (၀-၀) ဆိုရင် ဂိုးပေါင်းအောက်လောင်းတဲ့ သူ က အပြည့်အ၀ အနိုင်ရပါမယ် ။ (၁-၁) ဆိုရင် သရေ ၊ ပြန်ခွာ ပါ ။ တစ်ကယ်လို့ နှစ်ဘက် သွင်းဂိုး ၂ ဂိုးထက် ကျော်ခဲ့ရင်တော့ ဂိုးပေါင်းအောက် လောင်းထားသူ အပြည့်အ၀ ရှုံးပါမယ် ။ ဂိုးပေါင်းအထက်လောင်းထားသူ အနေ နဲ့ က တော့ ဂိုးပေါင်းအောက် လောင်းထားသူ နဲ့ ဆန့် ကျင်ဘက် ပါ ။ (၁-၁) ဆိုရင် ပြန်ခွာ ပြီး ၊ နှစ်သင်းလုံး သွင်းဂိုး ၂ ဂိုး ကျော်မှ အပြည့်အ၀ အနိုင်ရပါမယ် ။ ၂ဂိုး ၅၀ ရှုံး ဆိုတာ က ဂိုးပေါင်းအောက် လောင်းထားလို့(၁-၁) ရလဒ် နဲ့ ပွဲပြီး ခဲ့ရင် ဂိုးပေါင်းအောက် ၁၀၀ ကျပ်လောင်းထားသူ ဟာ ၄၅ ကျပ် နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ၅ % အကောက်နုတ်ပြီးသားပါ ။ ဂိုးပေါင်း အပေါ် ၁၀၀ ကျပ် လောင်းထားသူ က တော့ ၅၀ ကျပ် ရှုံးပါမယ် ။ ၂ဂိုး ၅၀ စား ဆိုတာက တော့ ဂိုးပေါင်းအောက်၁၀၀ကျပ် လောင်းထားလို့ (၁-၁) ရလဒ် နဲ့ပွဲပြီး ခဲ့ရင် ၅၀ ကျပ် ရှုံးပါမယ် ။ ဂိုးပေါင်းအပေါ်၁၀၀ကျပ် လောင်းထားသူ ကတော့ ၄၅ ကျပ် အနိုင်ရပါမယ် ။ အပြည့်ရှုံး ၊ အပြည့်နိုင်ဖို့ ဆိုတာ ကတော့ ၂ ဂိုးထက် နည်း မှသော်လည်းကောင်း ၊ ၂ ဂိုးထက် များမှသော် လည်းကောင်း ဖြစ်မှာပါ ။ ၃ လုံး ၅၀စား နဲ့၃လုံး ၅၀ ရှုံး ဆိုတာ ကလည်း ထို့ အတူပါပဲ ။ ဒီလောက် ဆိုရင် ဂိုးပေါင်းလောင်းခြင်း ကို သိကြမှာပါ နော် ။ ဂိုးပေါင်း ကတော့ ယနေ့ ထိ ၊ ဘောပွဲ ဒိုင်များ မှာ လောင်းလို့ ရပါတယ် ။ ဘော်ဒီ လောင်းကစားခြင်း ကိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ပို့ စ်မှာ အသေးစိတ် ရေးခဲ့ပြီး ပြီ မို့ ၊ည ဒီပို့ စ်မှာ ရေးမပြတော့ပါဘူး ။`
စာဖတ်သူ များအနေနဲ့သောကြာ ၊ စနေ ၊ တနင်္ဂနွေ နေ့ မျိုးတွေ မှာ ဆိုရင် ရပ်ကွက် ထဲ က ဆိုက်ကားဂိတ် ၊ ကွမ်းယာဆိုင် များ မှာ လက်တစ်ဖ၀ါးစာ အရွယ် ရှိတဲ့ စာရွက်ကလေး တွေ ကိုင်ထားကြတာ ကို တွေ့ ဖူးကြမှာပါ ။ အဲဒါ ` မောင်း ´ လို့ ခေါ်တဲ့ စာရွက်ကလေးတွေ ပါ ။ သေချာ ကြည့်လိုက်မယ် ဆိုရင် ၊ စာရွက်ပေါ်မှာ ကန်ကြမယ့် ဘောလုံးအသင်းများ နဲ့၊ တစ်ပွဲ ချင်းစီ ရဲ့ ဈေးတွေ ကို ရေးထားတာ ကို တွေ့ နိုင်ပါတယ် ။ မတွေ့ ဖူး ၊ မမြင်ဖူး ဘူး သူ များ အနေနဲ့အခုလာမယ့် သောကြာ၊စနေ၊ တနင်္ဂနွေ နေ့ များ မှာ ကိုယ့်အနီးအနား ရှိ ဆိုက်ကားဂိတ် ၊ ကွမ်းယာဆိုင် စတဲ့ နေရာမှာ မေးမြန်းတောင်းယူ ကြည့်ရှု နိုင်ပါတယ် ။ ` မောင်း ´ ဆိုတဲ့ လောင်းကစားခြင်း ဟာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ မှာ တော်တော်လေး ကျယ်ပြန့် နေတဲ့ လောင်းကစားခြင်း တစ်မျိုးပါ ။ လူတန်းစား မရွေး လောင်းလေ့ ရှိကြပါတယ် ။ များသောအားဖြင့် အခြေခံ လူတန်းစားတွေ လောင်းတာ များပါတယ် ။ သူ က အနည်းဆုံး ၅၀၀ ကျပ် မှသည် ၁၀၀၀၀ကျပ် ၊ ၂၀၀၀၀၀ ကျပ် ( အချို့ ဒိုင်ကြီးတွေ မှာဆိုရင် ကျပ်သိန်းချီသည်အထိ ) အထိ လောင်းလို့ ရတာကြောင့်ပါ ။ `မောင်း ´ ဆိုတာ က ပွဲ ၅ ပွဲ မှ သည် ၆ ပွဲ ၊ ၇ ပွဲ ၊ ၈ ပွဲ စသည်ထိ ရွေးခြယ်ပြီး လောင်းရတာပါ ။ တစ်ကယ်လို့ ကိုယ်ရွေးခြယ်ထားတဲ့ ပွဲအားလုံး မှန်ကန်ခဲ့မယ် ဆိုရင် ၅၀၀ ကျပ်အရင်းမှသည် တစ်သိန်းကျပ်ကျော် အထိ အလျော် ရရှိနိုင်တာကြောင့် အခြေခံ လူတန်းစား များ လောင်းကြတာ များပါတယ် ။ အလယ်အလတ် များနဲ့အချို့ ဝါသနာကြီးသူ လုပ်ငန်းရှင် တစ်ချို့ ပါ လောင်းကစားလေ့ ရှိကြပါတယ် ။ ` မောင်း ´ ဆိုတာ ကို ဥပမာ ပေးရမယ် ဆိုရင် ၊ မနက်ဖန် ည မှာ အာရှတိုက်အတွင်းရှိ နိုင်ငံများ ဖလားလုပွဲစဉ် တစ်ခု ရှိတယ် ဆိုကြပါစို့။ မြန်မာ vs ထိုင်း ၊ စင်ကာပူ vs မလေးရှား ၊ ဗီယက်နမ် vs အိုမန် ၊ လာအို vs အိန္ဒိယ ၊ အင်ဒိုနီးရှား vs တရုတ် ၊ ဂျပန် vs သြစတြေးလျ ၊ တောင်ကိုရီးယား vs မြောက် ကိုရီးယား စတဲ့ ပွဲစဉ်တွေ ရှိတယ် ဆိုပါစို့ ။ `မောင်း´ စာရွက် ကလေး ထဲ မှာ အဲဒီပွဲစဉ်တွေ ရဲ့ ကန်မယ့် အချိန်တွေ နဲ့ပွဲစဉ်တစ်ခု စီရဲ့ ဘေးမှာ ဈေးတွေ ပါရှိပါတယ် ။ လောင်းမယ့်သူ က တစ်ပွဲချင်း စီမှာ အနိုင်ရမယ့် အသင်းကို ခန့် မှန်း ရွေးခြယ် ရတာပါ ။ ဥပမာ ကျွန်တော် ပြောခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ် ၇ ပွဲ အတွက် ၊ စာဖတ်သူ က ဒီလို ရွေးလိုက်တယ် ဆိုပါစို့ ။ မြန်မာ ၊ စင်ကာပူ ၊ အိုမန် ၊ လာအို ၊ အင်ဒို ၊ ဂျပန် နဲ့ တောင်ကိုရီးယား ဆိုပြီး ၇ သင်း ရွေးခြယ် လိုက်ပြီး ၅၀၀ ကျပ် လောင်းလိုက်တယ် ဆိုပါစို့ ။ အဲဒီရွေးခြယ်လိုက်တဲ့ ၇ သင်းလုံး ဟာ ပေါက်ဈေးအရ ပြတ်ပြတ်သားသား အပြည့်အ၀ အနိုင်ရခဲ့မယ် ဆိုရင် စာဖတ်သူ က ၅၁၂၀၀ ကျပ် အလျော် ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အကောက် ၂၀ % နုတ်ပြီးသားပါ ။ အကောက် က ၂၀ % နုတ်ကြပါတယ် ။ တစ်ကယ်လို့ စာဖတ်သူ ရွေးခြယ်တဲ့ ၇ ပွဲ အနက် တစ်ပွဲ က အပြည့် မနိုင်ဘူး ၊ တစ်ဝက်ပဲ နိုင်ခဲ့မယ် ဆိုရင်တော့ ဒီထက် လျှော့ မှာပါ ။ သူ ရဲ့ တွက်ပုံ က ၊ ကိုယ်ရွေးခြယ်လိုက်တဲ့ ၇ သင်း ကို အပေါ်ဆုံး အသင်းကနေ အောက်ဆုံး အထိ ၊ တစ်ပွဲစီ တွက်သွားတာပါ ၊ ဥပမာ စောနက ရွေးခဲ့တဲ့ ၇ သင်း ဆိုရင် ၊ ပထမ ဆုံး မြန်မာ က နေ စတွက်ပါတယ် ၊ မြန်မာ အပြည့်နိုင်ရင် ကိုယ်က ၅၀၀ လောင်းထားတဲ့ အတွက် ၁၀၀၀ ဖြစ်သွားပါတယ် ။ ဒုတိယ စင်ကာပူ ကို ၁၀၀၀ ကျပ်နဲ့ ဆက်ကူး သွားပါတယ် ၊ စင်ကာပူ က အပြည့်နိုင်ခဲ့ ရင် ၂၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်သွားပါမယ် ။ စင်ကာပူ က နေ အိုမန် ကို ၂၀၀၀ နဲ့ ဆက်ပါတယ် ။ အိုမန် ပွဲ မှာ ထပ်အပြည့်နိုင်ခဲ့ရင် ၄၀၀၀ ဖြစ်သွားပါမယ် ။ အိုမန် က နေ လာအို ကို ၄ထောင် နဲ့ ဆက်လို့ အပြည့်နိုင်ရင် ၈ထောင် ၊ လာအိုကနေ အင်ဒို ၁၆၀၀၀ ၊ အင်ဒို ကနေ ဂျပန် ၃၂၀၀၀ ၊ ဂျပန်ကနေ တောင်ကိုရီးယား ၆၄၀၀၀ ပါ ၊ အားလုံး ပြီး မှ အကောက် ၂၀% နုတ်လိုက်တော့ ၅၁၂၀၀ လျော်ပါတယ် ။ တစ်ကယ်လို့ ပထမ ဆုံး အဆင့်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ နောက်ဆုံး အဆင့်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် တစ်ပွဲ ပွဲဟာ ပေါက်ဈေးအရ အပြည့်မနိုင်ပဲ ၊ ၅၀ ပဲ စားခဲ့တယ်ဆိုရင် တော့ ၃၈၄၀၀ ကျပ် ပဲ အလျော်ရရှိမှာပါ ။ တစ်ကယ်လို့ရွေးခြယ်ခဲ့တဲ့ ၇ ပွဲ မှာ တစ်ပွဲပွဲ က လောင်းဈေးအရ အပြည့်ရှုံးခဲ့ပြီ ဆိုရင်တော့ ၊ ကိုယ်လောင်းထားတဲ့ စာရွက် ကို စုတ်ဖြဲ လိုက်ရုံပါပဲ ။ တစ်ပွဲ အပြည့်ရှုံးတာနဲ့ ကျန်ပွဲ များကို ဆက်တွက် စရာ မလိုတော့ပါဘူး ။ တစ်ကယ်လို့ အပြည့်မရှုံးပဲ ၊ ပထမဆုံး မြန်မာပွဲ မှာ ၅၀ ရှုံးခဲ့ပြီး ကျန်အောက်ပွဲ တွေ အားလုံး အပြည့်နိုင်ခဲ့မယ် ဆိုရင် ၊ မြန်မာပွဲ အပြီးကို ၂၅၀ နဲ့ဆက်တွက် သွားရပါမယ် ။ ဒီလို မျိုး ဖြစ်လာပါတယ် ။ ၂၅၀ ၊ ၅၀၀ ၊ ၁၀၀၀ ၊ ၂၀၀၀ ၊ ၄၀၀၀ ၊ ၈၀၀၀ ၊ ၁၆၀၀၀ ဆိုပြီး ဖြစ်ပြီး အကောက်နုတ်ပြီး ၁၂၈၀၀ ကျပ် ရရှိပါမယ် ။ ဒီလောက်ဆိုရင် စာဖတ်သူ များအနေနဲ့` မောင်း ´ ဆိုတာ ကို သိရှိလောက်ပါပြီ ။
` မောင်း ´ ဆိုတဲ့ အမျိုးဟာ ဘောလုံးပွဲ ၀ါသနာပါသူ တော်တော် များများ လောင်းကြလေ့ ရှိပါတယ် ။ တစ်ကယ် ကျွမ်းကျင်တဲ့ သူတွေ ဆိုရင် တစ်လ ကို ၂ ကြိမ် ၊ ၃ ကြိမ် ခန့်မောင်းပေါက် လေ့ ရှိပါတယ် ။ အနိုင်ရရှိခြင်း ကို မောင်းပေါက် တယ် ၊ မောင်းအောင် တယ် လို့ ပြောကြပါတယ် ။ ` မောင်း ´ လောင်းခြင်း ဟာ အရင်းအနှီး နဲ တဲ့ အတွက် ဘောလုံး ပွဲ တစ်ရာသီ မှာ ဆိုရင် တစ်ကြိမ်လောက် အပြည့်အ၀ ပေါက်ရုံ နဲ့ တစ်ရာသီစာ အရင်းကြေပါတယ် ။ ဒါကြောင့် မို့ လည်း တော်တော်များများ လောင်းကြတာပါ ။ ဆိုးတာ တစ်ခု ကတော့ မောင်းဆိုတာ ကို များသောအားဖြင့် ဒိုင်အသေးလေး တွေ လုပ်ကြတာ များတဲ့ အတွက် ၊ ခိုင်မာမှု မရှိခြင်းပါ ။ ထိုးသားတော်တော်များများ မောင်း ကို ငွေပမာဏ များများ နဲ့ ပေါက်ပြီ ဆိုရင် ဒိုင်ပြေးလေ့ ရှိပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် လည်း ၀ါသနာ ကြီး သူ များ က တော့ နောက်ထပ် မောင်းဒိုင် ထပ်ရှာပြီး လောင်းကြစမြဲ ပါပဲ ။
အခု ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံ မှာ လောင်းကစား တာ များတဲ့ ဘော်ဒီ ၊ ဂိုးပေါင်း ၊ မောင်း နဲ့ ဖိုးကပ်စ် တို့ အကြောင်း ကို ကျွန်တော် ရေးပြ ပြီးပါပြီ ။ အခု ပို့ စ်မှာ ကျွန်တော် ရေးခဲ့တာလည်း တော်တော် ရှည်နေပြီ ဖြစ်တဲ့ အတွက် နားလိုက်ပါဦးမယ် ။ ဆက်လက်ပြီး ဒိုင်များ အကြောင်း ၊ ပေါက်ဈေးများ အကြောင်း နဲ့၊ လောင်းကစား ကြသူ တွေ ရဲ့ သဘောတရား လေးတွေ ကို ရေးသား ဖော်ပြပါဦးမယ် ။
အထူးပြောချင်တာကတော့ ဒီစာများကို ရေးသားခြင်း ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ဟာ မသိသေးသူများ သိရှိစေလို သော ရည်ရွယ်ချက် သီးသန့် ဖြင့်သာ ရေးသားထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ။ အပျင်းပြေ ဖတ်စရာ အဖြစ် ရေးသားထားခြင်းပါ ။ ဒီစာကို ဖတ်ပြီး လောင်းကြ ပါ လို့ လုံးဝ မဆိုလို ပါ ။ ကျွန်တော် ဒိုင် မဟုတ်ပါ ။ လောင်းကစား ၀ါသနာပါသူ ၊ လောင်းကစားလေ့ ရှိသူ တစ်ဦး သာ ဖြစ်ပါတယ် ။
( အားလုံး ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် )
အင်းထိုးသားရောခု အဆင်ပြေရဲ့ လား။အဆင်ပြေပါစေ ဆုတောင်းပါတယ်။ငွေရေးကြေးရေးအစစရာရာပေါ့။လောင်းကစားအလုပ်၊ငွေတိုးချေးတဲ့အလုပ်ဆိုတာ ဘုရားမကြိုက်ဘူးနော်။ရှောင်စေချင်ပါတယ်
Mee2 ခင်ဗျာ ၊ စိတ်ကောင်း စေတနာ နဲ့ လမ်းညွှန်ပြသပေးတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
ကိုဘီလူး ကို လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
မ Mee2 ကို ပြောလို တာ က
အဆိပ် ဆိုတာ ရှိခဲ့ရင် ဖြေဆေး ဆိုတာ ရှိပါတယ် ဆိုတာ လေးပါ ပဲ ။
ဘုရား မကြိုက်တဲ့ အလုပ် ဆိုတာ မှန်ပါတယ်
ကျွန်တော် ယနေ့ အချိန်ထိ လောင်းကစား နဲ့ ပတ်သက်ပြီး
သတိတရားကြီးစွာ ၊ ဆင်ခြင်တုံ တရားကြီးစွာ နဲ့လုပ်ကိုင်ခဲ့သဖြင့်
ရသင့်ရထိုက်သလို ရခဲ့ပါတယ် ။
ဘုရား တရား သံဃာ ကို လည်း မမေ့ ခဲ့ပါဘူး
ကိုယ် စေတနာ ပေါက်သလောက်
ကိုယ့်ရဲ့ ဝင်ငွေ ကနေ လှူဒါန်းခဲ့ ၊ လှူဒါန်းဆဲ ၊ ဆက်လက် လှူဒါန်းနေမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း ပါ ။
အော် ဟုတ်ကဲ့ပါ ကိုလေရွှီးရယ်။ခုလို ကုသိုလ်ရေးမှာ တတပ်တအား ပါဝင်နေတယ်ဆ်ုတော့သာဓုပါတော်။ဒါပေမယ့် တတ်နိုင်သလောက်တော့ရှောင်စေချင်ပါတယ်။မှန်မှန်တွေး၍ရှေ့ ရေးလှပါစေ
အခုလို စိတ်ရှည်လက်ရှည်ရှင်းပြပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်… တော်တော် ဗဟုသုတရတယ်ဗျာ… ဒါနဲ့ ဒိုင်ပြေးရင် ထိုးသားတွေ ဘာလုပ်ကြလဲ? အဲ့ဒီဒိုင်ကရော တစ်သက်လုံး ပြန်မလာတော့ဘူးလား? သိရင် ဆက်ပြောပေးပါဦးခင်ဗျာ
သဟုတုဗ ရပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ လောင်းကစားဒိုင်တွေ ပိုက်ဆံကောက် ဘောက်ချာဖြတ်တဲ့ ပုံစံကိုတော့ အံ့ဩမိတယ်။ ကိုလေရွှီးပြောသလို လက်တဝါးစာ ဘောက်ချာစာရွက်အစုတ်လေးနဲ့ အမှတ်အသားတခုခုလုပ်ပြီး ဖြတ်ပိုင်းထုတ်ပေးတယ်။ အတုလုပ်တာ၊ ပေးသူနဲ့ယူသူကြားထဲမှာ နားလည်မှုလွဲ ကလိမ်ကျတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ တချို့ဆို ဖုန်းထဲကနေ ဘောက်ချာဖွင့်တယ်။ ပိုက်ဆံကိုလည်း အကြိမ်များစွာစုပြီးမှရှင်းတယ်။
ကိုတော်ကာ တစ်ဖြစ်လဲ မောင်ပေသည် ဘောလုံးလောင်းကစားအရာ၌ နှံ့ စပ်သူ တစ်ဦးဖြစ်ပေသည်
ဘောတင်ဟုတ်ပါဘူး.. ၁လုံး..၂ လုံး..မလေးလုံး အကုန် နားလည်သူဖြစ်ပါသည်.
တစ်လုံး ၂ လုံး မလေးလုံးမှ ၁ပြား..၂ပြား..ပဲနံပြား …အဲ..ရှုပ်ကုန်ပြီ..
နောက်ပွဲတွေကြရင် မောင်ပေနဲ့တိုင်ပင်ပြီး တစ်ပွဲ..၂ပွဲ ရိုက်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်..
အောက်ကြေးက နိုင်တာများပေမဲ့ ..ကိုတော်ကာက အပေါ်ပဲ ရိုက်တယ်လို့ လဲသိရတယ်….
တော်ကြာ .ငါ့ရှိတဲ့ လခလေး ပလုံသွားမှဖြင့်.. နိပ်သေးပါဘူး..